Ogaden News Agency (ONA) – Dhagayso: Hogaanka Warfaafinta JWXO oo Kawarbixiyay Xaalada Halgame Cabdikariim.
Dhagayso: Hogaanka Warfaafinta JWXO oo Kawarbixiyay Xaalada Halgame Cabdikariim.
Laanta afka Axmaariga ee ideecada VOA-da ayaa waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya layeelatay Gudoomiyaha Hogaanka Warfaafinta Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO, Mudane Xassan macalim Muxumed.
Ugu horanba Mudane Xassan ayaa sheegay in 23 dii bisha August halgame Cabdikariim Sheekh Muuse laga qabtay magaalada Gaalkacayo ee xarunta Gobolka Mudug ee wadanka Soomaaliya, Mudane Xassan ayaa sheegay in ay halgame Cabdikariim qabteen ciidanka sirdoonka ee Galmudug iyagoo ugacan galiyay ciidanka sirdoonka Soomaaliya ee NISA looyaqaano.
Mudane Xassan Hogaanka Warfaafinta JWXO ayaa sheegay isla maalintii xigtay laga dajiyay magaalada muqdisho halkaas oo madaxda dowlada Somalia ugu saraysa halgame Cabdikariim gacanta kudhigeen si ay gacanta ugu galiyaan taliska wayaanaha, isagoo lageeyay jeelka Dabrezayt oo duleedka magaalada Addis Ababa kuyaala.
Mudane Xassan oo hadalkiisa siiwatay ayaa sheegay in shuruucda caalamiga ah iyo tastuurka Somalia midna uusan ogolayn in muwaadin Soomaaliyeed gacanta loogaliyo cadawgiisii oo dadkiisii iyo dalkiisiiba horaan ubaabi’iyay, wuxuuna hogaanku intaas kudaray in shacabka soomaaliyeed ay arintan argagax kaqaadeen
wariyaha ideecada VOA-da qaybta afka Axmaariga ayaa halgame Xassan waydiiyay darajada Cabdikariim Sh Muuse iyo xilka uu ONLF uhayay? wuxuuna mudane Xassan sheegay in uu halgame Cabdikariin ahaa xubin katirsan gudiga fulinta ee JWXO isla markaana uu ahaa hogaanka arimaha gudaha ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO.
Wariyaha ayaa markale mudane Xassan waydiiyay isagoo yidhi Cabdikariim soo ma ahayn taliyaha ciidanka JWXO? Wuxuuna mudane Xassan kujawaabay in halgame Cabdikariim uu 3dii sano ee udambaysay kusugnaa dibada wadanka Ogadenia isla markaana dhinaca diidanka JWXO ay rag kale u xilsaaran yihiin.
Wariyaha ayaa markale mudane Xassan waydiiyay maxaad caalamka usheegaysaa? Wuxuuna Hogaanku kujawaabay waxaan hay’adaha xuquuqda aadamaha udooda iyo hay’ada bisha cas kacodsanaynaa in ay kawarhayaan xaalada halgame Cabdikariim Sh Muuse, wuxuuna mudane Xassan sheegay in Itoobiya ay caan kudatah jidh-dilka dadka ay qabato, wuxuuna intaas raaciyay in Itoobiya ay borobagaan u isticmaasho qofka ay qabtaan.
Intaas kadib wariyaha waraysiga qaadayay ayaa khadka soogaliyay wasiirka Warfaafinta Gumaysiga Negri Lencho wuxuuna wasiir kusheego si dag dag ah uqirtay in ay gacanta kuhayaan halgame Cabdikariim Sh Muuse isagoo sheegay in ay usoo gacan galisay dowlada Soomaaliya.
Wasiir kusheega ayaa lawaydiiyay waxaad markasta wadamada dariska ah kasoo qafaalataan dad ma heshiis caalami ah ayaa jira? Wuxuuna wasiir kusheego sheegay in dowladaha dariska ay leeyihiin heshiis ugaar ah balse uusan ahayn heshiis caalami ah.
Wasiir kusheega ayaa lawaydiiyay soo idinkii lahaa ONLF waan tirtiray xageed kasoo qaqabanaysaan hadana? Wuxuuna kujawaabay in aysan tirtirin ONLF oo ay jirto khatarna kutahay balse ay wiiqantay waa sida uu hadalka udhigay e.
Inaca kale waxaa wasiir kusheega lawaydiiyay dowlada Somalia arintan waxay kusheegtay xaasaasi ee maxaad adigu dhihi lahayd wuxuuna sheegay in arintaas uu ka gaabsanayo isagu.
Dadwaynihii waraysiga Wasiir kusheega dhagaystay ayaa siwayn ulayaabay qaabka uu uhadlay wasiirka warfaafinta Gumaysiga oo hadalkiisu uu umuuqday nin dabadii kacabsade ah, halka ay dadwaynuhu ay aad ugu riyaaqeen qaab hadalka Hogaanka Warfaafinta JWXO.